Pm Japoney Shinzo Abe : Nampirisika ny Filoha tamin’ny ezaka vita -
AccueilRaharaham-pirenenaPm Japoney Shinzo Abe : Nampirisika ny Filoha tamin’ny ezaka vita
« Miditra amin’ny fifanarahana manaraka sy vaovao indray i Madagasikara sy Japon ankehitriny », izay no fahitan’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina sy ny praiminisitra japoney, Shinzo Abe ny zava-misy ankehitriny nandritra ny fihaonan’izy ireo omaly, tao Tokyo. Samy niara-nanaiky ny roa tonta fa mihamafy hatrany ny fifandraisan’ny firenena roa tonta, ary mandeha amin’ny tsara hatrany. Nampirisika ny filoha Hery Rajaonarimampianina hanohy ny ezaka efa nataony ny praiminisitra Japonais. « Ankasitrahana ny fametrahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fitoniana politika ao Madagasikara », hoy ny praiminisitra Shinzo Abe.
Nanamarika ny fihaonana ny fisian’ny fifanakalozana eo amin’ny lafin’ny fiarovana ara-tsakafo, ary ny famatsiana ny rano fisotro madio. Izay dia nanomezan’ny firenena Japoney vola mitentina 470 tapitrisa Yens, ary koa 200 tapitrisa yens ho an’ny fametrahana fanadiovana rano madio. Nanaraka izany dia nitondra ny fanohanany hatrany i Japon tamin’ny alalan’ ny praiminisitra Shinzo Abe amin’ny fametrahana ny planina nasionaly ho an’ny fampandrosoana, amin’ny alalan’ny fanampiana ara-teknika sy ara-bola ireo tetikasa goavana, ary ny fanamafisana ny faiza-manao.
Mahakasika kosa indray ny fifanarahana eo amin’ny lafin’ny fambolena, dia nitondra ny fahafahaliam-pony ny filoha malagasy tamin’ny fametrahana ilay tetikasa antsoina hoe (PAPRIZ 2), izay fandrindrana ny lakan-drano sy ny fitaterana ny rano eny an-tanimbary, ary ny fandrindrana ihany koa ny lakan-drano any atsimo andrefan’ny nosy dia ny lac Alaotra izany. Natsidiky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny mikasika ny tetikasa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, ary ny fanatanterahan’ny japoney ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasa. Tsy nohadinoin’ny filoha ihany koa ny nampatsiahy ny tohana izay ataon’ny orinasa Ambatovy amin’ny fampandrosoana ny firenena, ary ny fanaingana ihany koa ny toe-karena amin’ ny tanàna izay hiasan’ ny tetikasa.
Ankilany kosa dia nanambara ny praiminisitra japoney amin’ny ezaka izay vitan’ny fitondrana ankehitriny amin’ny ezaka natao amin’ ny fivoahana amin’ny krizy, ny ady amin’ ny kolikoly ary famerenana indray ny tany tan-dalàna sy ny famp akarana ny ara-karena faobe. Nankasitrahan’ny praiminisitra japoney Shinzo Abe ihany koa ny fomba nentin’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny fitantanana ny firenena eo amin’ny sehatra ivelany, a ry manaporofo izany ny toerana misy an’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan’ny ohatra nentin’ny praiminisitra japoney ny fandraisantsika ny fivoriamben’ny tany miteny frantsay, ny COMESA. Nandritra ny fandraisam-pitenenany ihany koa no nankasitrahany an’ i Madagasikara amin’ ny fanohanana ny tanàna OSAKA , ny filatsahany amin’ ny fandraisana ny fampirantiana oniversialy ny taona 2025, izay tanterahina amin’ ny 2018 ny fifidianana. Eo amin’izay fankasitrahana izay ihany koa dia tsy nohadinoin’ ity praiminisitra japonais ity ihany koa ny ezaka amin’ny fanajana fanitsakitsahana ny zon’ olombelona tao Corée Avaratra , anivon’ ny vondrona firenena mikambana . Tsy nihambahamba rahateo moa ny filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina nanameloka ny fihetsika izay nasehon’ny Corée Avaratra eo amin’ izay resaka ara-nokleary izay . nandritra ny fiaraha-misakafo tany an-toerana ihany koa no naneken’ny roa tonta ny fanatsarana hatrany ny fiaraha-miombon’antoky ny firenena roa tonta.
Home Improvement: You made some decent points there. I looked on the internet for the subject matter and found most persons will…